चार बुँदे माग राखेर डा. केसी १३ औं अनसनमा - Marganugami Daily
Marganugami Daily Breaking Headline1 National चार बुँदे माग राखेर डा. केसी १३ औं अनसनमा
चार बुँदे माग राखेर डा. केसी १३ औं अनसनमा
काठमाडौं, १९ असोज । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जका प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी बिहीबारदेखि १३ औं अनसन थालेका छन् । त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा साँझ पत्रकार सम्मेलन गरेर डाक्टर केसीले आफ्ना ४ बुँदे माग पनि सार्वजनिक गर्दै अनसन सुरु गरेका हुन् ।
उनले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमोड गरेर जनतामुखी र विद्यार्थीमुखी नभई माफियामुखी ऐन जारी गर्ने अन्तिम प्रयास भइरहेकाले डा. केसी अनसनमा बसेका हुन् । गत असोज ९ गते सुरू गरेको १२ रुऔं अनसन दसैंका कारण ११ गते नै स्थगित गरेका डा. केसीले १९ बाट पुनः बस्ने बताएका थिए ।
अनसन स्थगित गरेपछि १३ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर चिकित्सा शिक्षा विधेयक तोडमरोड नगरी पारित गर्न उनले असोज १९ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएका थिए ।